क्लिन फिड विवाद : ‘लोकल’ विज्ञापन पाउने कि नपाउने ? | News Polar
११ असार २०७६, बुधबार १६:४४
काठमाडौं । नेपालका टेलिभिजन वितरकहरु सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘क्लिन फिड’को व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलित बनेपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ । यसले नेपालका सञ्चारमाध्यममात्र होइन कि सामाजिक सञ्जाललाई पनि तताएको छ । क्लिन फिड भनेको विदेशी च्यानलहरुले उनीहरुले आफ्नो देशमा उत्पादन गरेको विज्ञापन यहाँका टेलिभिजनहरुमा प्रशारण गर्न नपाउने प्रक्रिया हो ।
जुन कुराको टेलिभिजन वितरकहरुले विरोध गरिरहेका छन् । विरोधस्वरुप वितरकहरुले २४ घन्टासम्म सबै विदेशी च्यानलको प्रशारण पनि बन्द गराए । तर यो कार्यको आम उपभोक्ताद्धारा विरोध भयो ।
जानकारहरु यो विषय यहाँका टेलिभिजन वितरकका साथै सरोकारवाला र कलाकारहरुले पनि बुझ्न नसकेको बताएका छन् । यस विषयका एकजना जानकार भन्छन्– यहाँ कलाकारहरु पनि त्यसै उफ्रिएका छन्, उनीहरुले विधेयकमा के कुरा छ भन्ने कुरा थाहा नै पाएका छैनन् । उनका अनुसार सो विधेयकमा विदेशी च्यानलहरुमा स्थानीय विज्ञापन पनि राख्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यो ‘क्लिन फिड’ नै हो, त्यसमा कुनै पनि विज्ञापन राख्न नपाउने गरी मस्यौदा गरिएको छ– उनले भने । उनको दाबी छ– यसले स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई फाइदा हुन्छ, नेपालका कलाकार आदिले काम पाउँछन् फाइदाजनक छ भनिएको छ, तर त्यो सरकारले विधेयक पास गराउनका लागि हो, त्यसमा धेरैको ध्यान पुगेको छैन ।
अहिले हाम्रा कलाकारको भनाई यो छकि उताको नआएर स्वदेशी विज्ञापन दिन पाउनुपर्छ, जसले गर्दा आफूहरुले पनि काम पाइन्छ । विज्ञापन एजेन्सीहरुको पनि त्यही हो । लोकल विज्ञापन चाहियो र त्यो नै ती च्यानलमा प्रशारण गर्नुपरो भन्ने हो । बाहिरका च्यानलहरु बन्द गर्नु अहिलेको जमानामा सम्भव छैन किनभने त्यो भनेको उत्तर कोरियाको जस्तो अवस्था आउने हो । त्यसैले यदि स्वदेशी विज्ञापन दिने हो भने त ठीक छ भन्नेमा सबै पुगेको अवस्था छ । तर विधेयकको वास्तविकता त्यस्तो नभएको कुरामा भने अहिलेसम्म पनि कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
यदि त्यो वास्तविकता बुझ्ने हो भने त त्यसले यताको न उताको विज्ञापन भन्ने नै ध्येय राखेको छ । यसरी भने च्यानल चल्न सक्दैनन् । यदि दुवै तर्फको विज्ञापन नआउने हो भने त्यस्तो अवस्थामा च्यानल चल्न सक्दैनन् किनेभने त्यो खाली समयमा के गर्ने त भन्ने कुरा हुन जान्छ । त्यसैले यो अहिलेको क्लन फिडको अवधारणा ठीक छ, यो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय आयकै पक्षमा रहन्छ । तर लोकल पनि विज्ञापन राख्न पाइएन भने त के काम भयो र ? यो कुरा विधेयक पास नुहँदै सबैले बुझ्न जरुरी छ ।